Ndị Filipaị 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Filipaị 3:1-21
3 N’ikpeazụ, ụmụnna m, na-aṅụrịnụ ọṅụ n’ime Onyenwe anyị.+ Idetara unu akwụkwọ banyere otu ihe ahụ ugboro ugboro adịghị enye m nsogbu, kama ọ bụụrụ unu ihe nchebe. 2 Lezienụ anya maka ndị dị ka nkịta,+ lezienụ anya maka ndị na-arụ ọrụ ọjọọ, leziekwanụ anya maka ndị na-ebepụ ahụ́ ha.+ 3 N’ihi na ọ bụ anyị bụ ndị nwere ezi ibi úgwù,+ ndị na-eje ozi dị nsọ site na mmụọ Chineke,+ anyị jikwa Kraịst Jizọs anya isi,+ anyị enweghịkwa obi ike n’anụ ahụ́,+ 4 ọ bụ ezie na mụ onwe m nwere ihe mere m ga-eji nwee obi ike n’anụ ahụ́, ma ọ bụrụ na ọ dị onye ọ bụla nwere. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ọzọ echee na ya nwere ihe mere ọ ga-eji nwee obi ike n’anụ ahụ́, m nwere karịa ya:+ 5 e biri m úgwù n’ụbọchị nke asatọ,+ esi m n’ezinụlọ Izrel, n’ebo Benjamin,+ abụ m onye Hibru nke ndị Hibru mụrụ;+ n’ihe banyere iwu, abụ m onye Farisii;+ 6 n’ihe banyere ịnụ ọkụ n’obi, akpagburu m ọgbakọ;+ n’ihe banyere ezi omume dị ka iwu si dị, abụ m onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta. 7 Ma, ihe ndị bụụrụ m uru, m weere ha dị ka ihe na-abaghị uru n’ihi Kraịst.+ 8 N’ihi nke ahụ, ana m agụ ihe niile n’ezie dị ka ihe na-abaghị uru n’ihi uru na-enweghị atụ nke ihe ọmụma banyere Kraịst Jizọs Onyenwe m bara.+ N’ihi ya, ekwerewo m ka ihe niile funahụ m, ana m agụkwa ha dị ka nnukwu ihe e kpofuru ekpofu,+ ka m wee rite uru n’ime Kraịst 9 ma bụrụ onye mụ na ya dị n’otu. Nke a adabereghị n’ezi omume nke m, nke na-esi n’idebe iwu,+ kama n’okwukwe+ e nwere na Kraịst, bụ́ ezi omume nke si n’aka Chineke n’ihi okwukwe,+ 10 ka m wee mara ya, marakwa ike nke mbilite n’ọnwụ ya,+ kerekwa òkè n’ahụhụ ya,+ nyefeekwa onwe m n’aka ụdị ọnwụ ahụ ọ nwụrụ,+ 11 ka m wee hụ ma ò nwere ụzọ m ga-esi nweta mbilite n’ọnwụ bu ụzọ+ site ná ndị nwụrụ anwụ. 12 Ọ bụghị na mụ anatawo ya ma ọ bụ na e mewo ka m zuo okè,+ kama m na-achụso+ ya iji hụ ma m̀ ga-ejide+ ihe ahụ ọ bụ n’ihi ya ka Kraịst Jizọs ji jide m.+ 13 Ụmụnna m, agụbeghị m onwe m n’onye jidere ya; kama o nwere otu ihe dị na ya: Ana m echefu ihe ndị dị n’azụ,+ na-amatịkwa onwe m inweta ihe ndị dị n’ihu,+ 14 ana m achụso ihe mgbaru ọsọ+ ahụ iji nweta ihe a na-agbata n’ọsọ,+ bụ́ òkù a kpọrọ ịga eluigwe,+ nke Chineke kpọrọ site n’aka Kraịst Jizọs. 15 Ya mere, ka anyị niile bụ́ ndị tozuru okè+ nwee ụdị echiche a;+ ọ bụrụ na unu nwere echiche dị iche n’ụzọ ọ bụla, Chineke ga-ekpughere unu echiche ahụ ziri ezi. 16 Ka o sina dị, ruo n’otú anyị nweruru ọganihu, ka anyị na-eje ije n’ụzọ kwesịrị ekwesị+ n’otu ụkpụrụ a. 17 Ụmụnna m, bụrụnụ ndị dị n’otu n’iṅomi m,+ na-elegidekwanụ anya ná ndị na-eje ije dị ka ihe nlereanya anyị hapụụrụ unu si dị.+ 18 N’ihi na e nwere ọtụtụ ndị, m na-ekwu banyere ha mgbe mgbe n’oge gara aga, ma ugbu a, eji m ákwá na-ekwu banyere ha, ya bụ, ndị na-eje ije dị ka ndị iro nke osisi ịta ahụhụ nke Kraịst,+ 19 ọgwụgwụ ha bụ mbibi,+ chi ha bụ afọ ha,+ otuto ha dịkwa n’ihere ha,+ ha na-atụkwasịkwa uche ha n’ihe ndị dị n’ụwa.+ 20 Ma ikike anyị nwere dị ka ndị amaala+ dị n’eluigwe,+ bụ́ ebe onye nzọpụta, bụ́ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst,+ onye anyị na-echeresi ike,+ ga-esi bịa 21 onye ga-agbanwe ọdịdị ahụ́ anyị e wedara n’ala+ ka o kwekọọ n’ahụ́ ya dị ebube+ dị ka ịrụ ọrụ+ nke ike o nwere si dị, ya bụ, ido+ ihe niile n’okpuru onwe ya.
Ndị Filipaị 3